ဖျူးစ်အသုံးပြုရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ| HINEW
Fuse ကိုင်ဆောင်သူ ထုတ်လုပ်သူ
ယနေ့မျှဝေသည့်အကြောင်းအရာသည် အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထားသော fuses များကို ထုပ်ပိုးနိုင်မလား။ ထုပ်ပိုးရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ရယူသည့် fuse တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များ နှစ်ခုပါရှိသောကြောင့် အဖြေမှာ မဟုတ်ပါ- 5x20 ဖျူးကိုင်ဆောင်သူများထားပါသည်။
ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သည့် fuse ကို ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါသလား။
1. ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ ပုံမှန်အပူရှိန်ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ထုတ်ကုန်၏ ရွေ့လျားမှုလက္ခဏာကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။
2. တင်းကျပ်သော သို့မဟုတ် မာကြောသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် PTC ပစ္စည်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာကို ထိခိုက်စေပြီး ထုတ်ကုန်ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အပိုအလိုအလျောက် ပြန်လည်ပြုပြင်သည့် fuse ထုတ်ကုန်များကို ထုပ်ပိုးရန် ယေဘုယျအားဖြင့် မထောက်ခံပါ။ ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ပါက ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများရွေးချယ်ရာတွင် အထူးဂရုပြုသင့်သည်။
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများသည် အလွန်မာကျောပါက၊ ၎င်းသည် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၏ ချဲ့ထွင်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး ၎င်း၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ "ပျော့ပျောင်းသော" တံဆိပ်ခတ်ထားသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါတွင်ပင် thermistor ၏အပူငွေ့ပျံခြင်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
Automobile fuse သည် လက်ရှိ fuse အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ circuit current သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိထက်ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ fuse သည် circuit protection ၏ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ မော်တော်ကား fuse များကို အများအားဖြင့် မော်တော်ကားဆားကစ်များကို လက်ရှိ over-current protection အတွက်သာမက စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏ လက်ရှိ over-current protection အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ မော်တော်ယာဥ်ဆားကစ်များရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများအပြားကို ဝါယာကြိုးများ၏ အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး အရေးကြီးဆုံးမှာ fuses ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ မော်တော်ယာဥ် ဖျစ်ပေးသွင်းသူများမှ ပံ့ပိုးပေးသော ဖျစ်ကွင်းများတွင် (ပလပ်အင်မော်ဒယ်များအတွက် သင့်လျော်သည်)- ပလပ်အင်ဖျူးကွင်းအသေးများ၊ အလတ်စား ပလပ်အင်ဖျူးကွင်းများနှင့် ကြီးမားသော ပလပ်အင်ဖျူးကွင်းများ ပါဝင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါကို အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ fuse bracket ၏ရွေးချယ်မှုသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုနိုင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ အဓိကအားဖြင့် fuse bracket ၏တပ်ဆင်အရွယ်အစား၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကားဖျူးအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစားထိုးနည်း- ကားအသုံးပြုနေစဉ် လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက fuse မီးလောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို အချိန်မီ အစားထိုးရန်အတွက် မော်တော်ယာဥ် fuse ပေးသွင်းသူကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. မီးခလုတ်ကိုပိတ်ပြီး fuse cover ကိုဖွင့်ပါ။
2. ဖျူးကို အစားထိုးပါ။ သတိထားရမည့်ကိစ္စများ။
(၁) ကျေးဇူးပြု၍ ဖျူးစ်ဘောက်စ်အဖုံးတွင် အမှတ်အသားပြုထားသော လက်ရှိတန်ဖိုးအတိုင်း ဖျူးကို အစားထိုးပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ရှိထက် ပိုမြင့်သော ဖျစ်ကို အစားထိုးခြင်းမပြုပါနှင့်။
(၂) fuse အသစ်ကို ချက်ချင်းပြန်ပြီး ပေါင်းစပ်ပါက circuit system တွင် တစ်ခုခု မှားယွင်းနေနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြပြီး တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်သည်။
(၃) ဖလပ်မရှိလျှင် ဖျူးစ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင်၊ မောင်းနှင်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးထိခိုက်မှုမရှိသော အခြားစက်ပစ္စည်းများကို fuses များဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများသည် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သည့် ဖျစ်အား ထုပ်ပိုးထားနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Huizhou Maniu Electric Co., Ltd. သည် 5x20 fuse holder၊ မော်တော်ကား fuse holder၊ မော်တော်ကား fuse box၊ switch၊ socket၊ thermostat စသည်တို့ကဲ့သို့ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးပြုပါသည်။ နားလည်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။
1. Fuse ထိုင်ခုံတည်ဆောက်ခြင်း။
2. Fuse ကိုင်ဆောင်သူများ ဝယ်ယူအသုံးပြုရန်အတွက် မည်သည့်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သနည်း။
3. Fuse ကိုင်ဆောင်သူများကို မည်သို့ခွဲခြားသင့်သနည်း။
4. Slow fuse နှင့် fuse ၏ ပါဝါကို ခွဲခြားနည်း
5. လုပ်ဆောင်ချက်မုဒ်နှင့် ဖျူးကိုင်ဆောင်သူ၏ အပူချိန်လိုအပ်ချက်များ